Fakana an-keriny teny Alasora? : ankizy mianadahy niara-tsy hita popoka | NewsMada
Fakana an-keriny teny Alasora? : ankizy mianadahy niara-tsy hita popoka
Mihevitra ny ray aman-drenin’ny mpianadahy roa niara-tsy hita fa nisy naka an-keriny ny zanany teny Alasora ny asabotsy teo. Mbola tsy hita popoka ireo ankizy ireo. Nokarohina hatraiza hatraiza…
Tsy hita nanomboka ny asabotsy teo ary mbola tsy hita hatramin’izao, ny ankizy mianadahy Rasaomoelina Jenny Nantenaina, 15 taona, sy Rasamoelina Francky Nambinina, 14 taona. Araka ny fanazavan’ny rain’izy ireo, niala tao an-tranony eny Anosizato Atsinanana izy ireo ary namangy ny fianakaviany eny Alasora. Tsy tao anefa ireo havany ka tokony ho niverina nody izy dahy. Voalaza fa teo akaikin’ny Domaine Alasora ny nahitana azy ireo farany tokony ho tamin’ny 6 ora sy 45 minitra.
“Efa nokarohina nanerana ny fianakaviana fa tsy any izy ireo. Toy izany koa amin’izay toerana mety nalehany. Tsy mbola hita hatramin’izao. Mihevitra izahay fa nisy naka an-keriny ireo zaza ireo”, hoy ny fanazavan’ny rainy. Nambaran’ity farany fa tsy fanaon’ireo ankizy ireo ny tsy mody an-trano ka nampiahiahy azy ireo ny amin’ny fakana an-keriny izay. “Rehefa afa-nenina tamin’ny fikarohana izahay, hametraka fitoriana eny amin’ny polisy”, hoy ny fanamafisana.
Mitaintaina ny ray aman-dreny
Tranga maro ny resaka zaza very na ankizy tsy hita eto amintsika. Tena misy tokoa ny zaza very ary maro ny fampilazana hita na eny amin’ny peta-drindrina na any amin’ny mpitandro filaminana. Araka ny fanazavana azo, matetika mandositra miala ny tranon-dray aman-dreniny ny zaza noho ny antony maro. Ao ihany koa ny fitarihan’olona, sns. Rehefa manao ny fanadihadiana ny polisy, miafara amin’izay tranga izay hatrany. Manana andraikitra ny ray aman-dreny amin’ny fitaizana ny zanany. Miteraka andranandrana eo amin’ny ankizy ny tambajotra sosialy ka mampanaonao azy foana. Ilaina ny fanaraha-maso, ny resadresaka amin’ireo zanaka ao an-trano, raha tsy izany, hamoa-doza hatrany izy ireny.
Ho an’ity tranga farany, miangavy izay manana vaovao hampandre ny manampahefana akaiky azy na hiantso ny laharana: 034 08 448 76 – 03311 312 78 – 032 42 342 43 ny fianakaviana. Omena valisoa izay mahita azy, tsy misy arakaraka.